Izinjini Ezigciniwe Zomthombo Ovulekile ezingama-35 | Kusuka kuLinux
Izinjini Ezigciniwe Zomthombo Ovulekile ezingama-35
I-athikili abayilungisile imnandi kuWebResourceDepot lapho zisitshela khona ngamathuba amakhulu esinawo lapho sikhetha injini yedatha kunkambu yomthombo ovulekile.
Njengoba kukhonjisiwe ku-athikili, mhlawumbe uyazi ezinye izindlela (ezinye zazo ezentengiselwano):
Njengoba kukhonjisiwe kulowo mbhalo, kuyinto ejwayelekile ukuthi lezi zinketho zisabalele kakhulu: zibhalwe kahle kakhulu, kunomphakathi omkhulu wabasebenzisi ngemuva kwabo bonke futhi ahlanganiswe kakhulu neningi le-CMS emakethe, ngaphezu kokutholakala ezinkampanini ezinkulu zokubamba. Kepha kukhona umhlaba wonke wamathuba odlula lezo zinketho.
Ikhombisa lesi sihloko esingenhla, engizomane ngivumelanise nokuthi ngincoma ukuthi uvakashele. Izinketho ezingama-35 zomthombo ovulekile kulo mkhakha yilezi ezilandelayo, futhi okokuqala, ake ngixolise ngokuhumusha. Angiwazi amagama amaningi aphethwe ku-athikili ngakho-ke kungenzeka ukuthi ngithole enye incazelo:
3 I-Apache CouchDB
6 I-Oracle Berkeley DB
7 I-Apache cassandra
13 Isitolo se-4
20 Ezinye izindlela
IHypertable uhlelo lokusebenza lokusabalalisa idatha olusatshalalisiwe olusetshenziselwe ukuxhasa izinhlelo zokusebenza ezidinga ukusebenza okuphezulu, ukukwazi ukusebenza kahle, nokusebenza kahle. Yenzelwe futhi yahlelwa ngemuva kwephrojekthi ye-Google BigTable futhi igxile kakhulu kumasethi wedatha amakhulu.
Kuyinjini yokuphikelela ethengiselana ngokuphelele eJava egcina idatha ngamagrafu, hhayi amatafula. INeo4j inikeza ukukhubazeka okukhulu. Ingaphatha amagrafu ezinombolo / ubudlelwano / izakhiwo eziyizigidi eziyizinkulungwane emshinini owodwa, futhi ingakalwa ngemishini eminingi.
I-Riak iyi-database ekahle yezinhlelo zokusebenza zewebhu futhi ihlanganisa:
Isitolo esinenani lokhiye elisabalalisiwe
Imephu eguquguqukayo / ukunciphisa injini
Isixhumi esibonakalayo semibuzo se-HTTP / JSPN.
I-Oracle Berkeley DB
Kuyinjini yedatha eshumekiwe enikeza abathuthukisi ukuphikelela kwendawo okusheshayo nokusheshayo ngokulawulwa kwe-zero. I-Oracle Berkeley DB ilabhulali exhumanisa ngqo kuzinhlelo zethu zokusebenza futhi ivumela izingcingo zomsebenzi ezilula esikhundleni sokuthumela imiyalezo kwiseva ekude ukwenza ngcono ukusebenza.
ICassandra mhlawumbe ingenye yamaphrojekthi we-NoSQL aziwa kakhulu emakethe. Kuyisizinda semininingwane sesizukulwane sesibili esinokukhubazeka okuphezulu okusetshenziswa yimidondoshiya efana ne-Facebook (okuyiyona eyithuthukisile), iDigg, iTwitter, iCisco nezinye izinkampani. Umgomo ukuhlinzeka ngemvelo engaguquguquki, ebekezelela amaphutha, futhi etholakala kakhulu yokugcina idatha.
Kukhunjulwe isitolo sohlobo lwe-in-memory key-value ngezintambo zedatha ezingenakuphikiswa (imibhalo, izinto) ezivela emiphumeleni yezingcingo ezigciniwe, izingcingo ze-API, noma ukunikezwa kwekhasi. Ihloselwe ukusheshisa izinhlelo zokusebenza zewebhu ezinamandla ngokunciphisa umthwalo ku-database.
I-Firebird -ngeke ididaniswe neFirefox- iyi-database ehlobene engasetshenziswa ku-Linux, Windows nakuma-platforms e-UNIX ahlukahlukene, futhi inikezela ngokusebenza okuphezulu nokusekelwa kolimi okunamandla izinqubo ezigciniwe nezimbangela.
I-Redis iyi-database ethuthukile yohlobo lwenani lokhiye osheshayo lelo Kubhalwe ku-C futhi kungasetshenziswa njengokukhunjulwa, ngaphambi kwesizinda sedatha, noma kukodwa ngokuzimela. Inokusekelwa kwezilimi eziningana zokuhlela futhi isetshenziswa kumaphrojekthi athandwa kakhulu njengeGitHub noma i-Engine Yard. Kukhona futhi iklayenti le-PHP elibiziwe I-Rediska lokho kuvumela ukuphatha imininingwane yolwazi yeRedis.
I-HBase isitolo esisatshalaliswe ngamakholomu engabuye ibizwa ngokuthi i-Hadoop database. Le phrojekthi kuhloswe ngayo ukunikela ngamatafula amakhulu "wezigidigidi zemigqa, nezigidi zamakholomu". Inesango eli-RESTful elisekela izinketho zokufaka ikhodi kwedatha kanambambili.
Yisitolo sohlobo lwenani lokhiye esinokuphindaphindeka okungaguquguquki futhi okusebenza kumasistimu okusebenza weWindows. I-Keyspace inikeza ukutholakala okuphezulu ngokufihla ukwehluleka kwenethiwekhi neseva nokuvela njengensizakalo eyodwa yokutholakala okuphezulu.
I-4store iyinjini yokugcina imininingwane nemibuzo egcina idatha ngefomethi ye-RDF. Kubhalwe ku-ANSI C99, kuklanyelwe ukusebenza ezinhlelweni ze-UNIX, futhi kunikezela ngeplatifomu esebenza kahle kakhulu, esabekayo, futhi ezinzile.
IMariaDB igatsha elihambisana nokubuyela emuva le-MySQL® Database Server. Kubandakanya ukusekelwa kwezinjini eziningi zokugcina imithombo evulekile, kanye nenjini kaMaria yokugcina uqobo.
Kuyimfoloko ye-MySQL egxile ekubeni yidathabheyisi esebenza kahle futhi ezinzile, ikakhulukazi elungiselelwe izinhlelo ze-Intanethi nezilandela ifilosofi ye-Cloud Computing.
Kuyinjini yedatha ye-SQL ehlobene ebhalwe eJava. IHyperSQL inikezela ngenjini yedatha encane kodwa esheshayo enamatafula akwi-memory and disk, futhi asekela izindlela ezishumekiwe neziseva. Ngaphezu kwalokho, inamathuluzi afana ne-SQL command console ne-graphical interface yemibuzo.
I-MonetDB iyisistimu yedatha yezinhlelo zokusebenza ezisezingeni eliphezulu ezihlose ukumba idatha, i-OAP, i-GIS, ukuseshwa kweXML, nokuqoqwa kolwazi kusuka kumafayili wombhalo nakuma-multimedia.
i-eXist-db ithuthukiswa ngobuchwepheshe beXML. Igcina idatha ye-CML ngokuya ngemodeli yedatha yaleli zinga, futhi ibonakala ngokucubungula okusebenzayo nokususelwa enkombeni kweXQuery.
I-Gladius (Idatha egciniwe yefayela le-PHP)
I-OpenQM (i-database enemikhakha eminingi)
OkubomvuDME (i-database enemikhakha eminingi)
EncaneSql (Injini Yesizindalwazi yeJava Desktop SQL)
IHyperGraphDB (i-graph database)
I-InfoGrid (i-graph database)
Isizinda sedatha se-H2
Kubonwe ku | I-Linux kakhulu
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » Izinjini Ezigciniwe Zomthombo Ovulekile ezingama-35
Itimu yokukhetha uhlelo lokusebenza: Ubuntu Radience
Uhlobo olusha lwe-Loculinux, i-linux yezindawo zokudlela ezinhle ze-cyber